အစ္စလာမ်အဖွဲ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်တွန်း
Myo Chit :
Bengali Rohingya is not refugees in Bangladesh because Bangladesh is their country of origin. If OIC members want to help Bangladeshi Government and then they should resettle Bengali Rohingya in their country. Jul 31, 2012 10:47 PM
WHO accept these rohinger are who will destroy myamar , our religion, our nationality and who have to leave our country Jul 15, 2012 02:32 AM
it's very disappointed situration..This muslim organization think their muslim lost Human right,,,no no...all people from Myanmar are losing human right..but we cant acept Bingali as our race.According to our teaching of Buddha ..we know all are same..man or women or different skins or religions..we all are same..But why dont respect our culture even they live in our country by illegal...Can we live together in peace?i dont think........Interfrence from muslim organization it will be more danger for our country...So...do your work and solve your ME problem fast...and then bring your one Million Rohingya to Sadi,Qartar,Dubai.or your lovely place Jesualim .here is flood with Chinese .LOL.no place for Rohingya...
Jul 14, 2012 05:43 AM
Burma was not located only for Buddist and thatz also for Other relagious,too.
Specially not for Bangali-Mogh.
Jul 12, 2012 02:39 AM
yes, we don't allow to live them in Myanmar
Jul 16, 2012 05:29 AM
ရိုဟင်ဂျာတွေက သူများနိုင်ငံမှာလဲခိုနေသေးတယ် အီမ်ရှင်တွေကိုလည်းစော်ကားသေးတယ် သူ့တို့တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာမထားသင့်ဘူး
Jul 11, 2012 02:53 PM
get out of my country...ROHINGAR
Jul 11, 2012 06:21 AM
Hello,OIC..mind your own businees at your backyard,talk about women rights,war in Syria,etc;we absolutely don't need your advice.
Jul 10, 2012 11:24 PM
ရိုဟင်ဂျာများသည်မြန်မာမူစလင်လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့နှင့်ဘာသာတူနိုင်ငံများဍ်သာနေသင့်ပါသည်။ မြန်မာဗုဒဘာသာတယောက်မူစလင်နိုင်ငံကိုမကြိုက်ပါကသူသည်မူစလင်နိူင်ငံကိုပြတ်သနာရှာ၍မရပါ။ မိမိနှိင်ငိ သို့မဟုတ် ကြိူက်နှစ်သက်ရာ သိုသွားနှိင်သည် သွားသင့်သည်ဟုဃူဆပါသည်။ ထိုနည်းတူ ရိုဟင်ဂျာတိုသည်လည်း. ဤလမ်းစဉ်ကိုလိုက်သင့်ပါသည်။
Rohinja are invading our country, insulting and killing our people, putting fire Rakhaine people's houses. They are terrorists so driven back to Bangladash.
RFA က ကုလားပွဲစားလုပ်နေတာလား
Jul 10, 2012 02:10 AM
လွယ်လွယ်တွေး၊ လွယ်လွယ်လေး လုပ်လို့မရသည်ကို သတိပြုကြစေလိုပါသည်.
Jul 09, 2012 09:58 PM
Jul 08, 2012 03:32 AM
ရခိုင်ပြိုရင် ဗမာငိုရပြီးပေါ့ အန်တီစုရေ Jul 08, 2012 01:52 AM
ကိုယ်ကမကျူး၊ သူကျူးလာသည့်၊ သူ့နိုင်ငံသား၊ သံမှုန်စားလည်း၊ သေမှာမကြောက်၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ ရင်ကိုကော့လျှက်၊ ဓါးငှက်ကြီးတောင်၊ လက်ဝယ်ဆောင်ကာ၊ အသက်စွန့်ပြီ၊ တိုက်ခိုက်တတ်တာ၊ တို့မြန်မာ ........။ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ပြုလုပ်ကြလျှင် ငါတို့တစ်မျိုးလုံး သူတို့၏ ကျွန်ဘ၀ကို ရောက်ကြချိမ့်မည်။
Jul 06, 2012 10:21 PM
တော်တော် ကောင်း တဲ့ ကဗျာ ပဲ
Jul 14, 2012 09:42 AM
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာမှမဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာသောမဂျာသော အားလုံးသော သူတို့နဲ့အယူအဆ၀ါဒမတူညီသူများဟာ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေကြရတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူပြောတာကဘာတဲ့၊ ရိုဟင်ဂျာတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာတဲ့ ပြောင်းပြောင်းပြန် ဇောက်တိဇောက်ထိုးဆိုသလိုတော့ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်နော၊ ဒါပေမယ့် ထားပါလေ၊ ဒါတွေက မလွတ်လပ်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူဖြစ်လာရတာကိုက မကောင်းပါဘူး။
Jul 06, 2012 12:20 PM
go to hell for asking that. help yourself and take all ROHINGAR to your country. Am I clear.
Jul 06, 2012 12:15 PM
ဒီလိုပြသနာတွေရှိနေသရွေ့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီလို အမုန်းတရားတွေမရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ အန်တီစုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်အာဏာရှင် ရဲ့ခေါင်းမာတဲ့လူတစ်စုရဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Jul 06, 2012 11:17 AM
Jul 06, 2012 10:38 AM
This is the Big challenge for Nobel Prize Leader DASSK and very narrow path among Internal & International communities.Just wait and see how she will pass over with her political talent. Jul 06, 2012 09:46 AM
They should request her to convert Islam, the best way to support them.
Jul 06, 2012 04:53 AM
မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာတွေ အကြမ်းဖက်ခံရမှု ဆိုတဲ့စာသားကို ကန့်ကွက်တယ်........
Jul 06, 2012 12:35 AM
Jul 06, 2012 12:01 AM
you should call all the Rohingya to your country. If you do so . we will very grateful to you very much.
Jul 05, 2012 11:10 PM
၇ိုဟင်၈ျာ တွေကို ဆော်ဒီ နိင်ငံ ခေါထါး၊ဲမြန်မါနိင်ငံသည် ဗုဒွဘါသါ
Jul 05, 2012 09:19 PM
ငပြူက ပြဲနေပြန်ပါပြီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘယ်သူက တိုက်ခိုက်နေလို့လဲ ငါတို့တိုင်းပြည်ထဲကို ကျူးကျော်ပြီး ၀င်ရောက်တေထိုင်ရုံမျှမက ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပါ စော်ကား ရပ်ရွာ အိုးအိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး ၊ လူတွေကိုသတ် လုပ်နေတနာ မင်းတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေပါကွာ ပါးစပ်ကလေးတခုအရင်းပြုပြီး ပြောမနေပါနဲ့ အဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို မင်းတို့အမှန်တကယ်ချစ်ရင် မင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုခေါ်သွားပါ .......အဲဒါအကောင်းဆုံး အဖြေပါ။
Jul 05, 2012 07:58 PM